FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PUGSHIRE - ALIKA
Alika mifangaro Pug / Yorkie mifangaro
Penny the black Pugshire (karazana mix Pug / Yorkie) amin'ny 9 volana- Penny. Pugshire mahafinaritra ahy. Izy no manana ny toetrany tsara indrindra amin'ny Pug sy Yorkshire Terrier. Ny mamanany dia Pug mainty tsara tarehy antsoina hoe Dolly & ny dadany dia Yorkshire Terrier tena tsara tarehy antsoina hoe Charlie. I Penny dia milalao sy be fitiavana, Ratsy nefa mahafinaritra, hainy tsara ny manilika ny lohany ary manome ahy maso alika alika kely mahafatifaty indrindra hahazoana izay tiany! Manao feo hafahafa indrindra izy rehefa milaza aminao izay tadiaviny, sahala amin'ny miresaka aminao izy, raha ny marina dia azoko antoka fa. Izy no zava-drehetra nofinofisiko tamin'ny alika, izy no Penny. '
Ny alika Pugshire dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pug ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Pugshire Terrier
Mpanoratra International Canine Registry®= Pugshire
'Ity ny Pug / Yorkshire Terrier (Pugshire) ahy amin'ny 4 taona. Nandalo vao tsy ela akory i Bruno fa alika mahatalanjona izy. Ambany fikojakojana izy ary kely fotsiny no navoakany. Handeha manodidina izy 3-6 mandeha isan-kerinandro . Tiany ny nihady tao anaty fitoeram-pako ka tsy maintsy notohizinay izany! Lehilahy mpahay siansa mahay izy, nilalao alika hafa tsara, nifikitra tao an-trano izy rehefa navela hivoaka, ankizy tiany, alika hafa ary ny olon-drehetra. Tsapako fa alika niavaka i Bruno ary tena mahay mandanjalanja. Afaka nandeha avy natory / natory ka hatrany ambony sy nilalao / nihazakazaka izy. Tiany ny lanezy, sy ny rano amin'ny andro mafana. Tena alika mahatalanjona izy miaraka amina toetra tokana ary tena tsy hahita izy. '
'Cash ity, zanako kely Pugshire amin'ny 3 volana. Alika tena mahay sy milalao izy. Ny fika eritreretiko amin'ireo alika ireo dia ny mahazatra, ny tsy fitoviana ary ny fotoana laniana. Tiany ny milalao ary mandeha mitsangatsangana . Izy koa dia tena mahatoky amin'ny dia any amin'ny kirihitr'ala mandritra ny herinandro amin'ny 4 volana izay tsy niainga nandritra ny 20 minitra na mihoatra, ary niverina foana hijery izay misy anay. Mijery ny Whisperer Alika sy ny zavatra rehetra hitako niasa, fiofanana momba ny kennel, fiofanana vilany , fahazarana mihinana , ary fahefana . Ny tsara indrindra dia ny valiny fanamafisana ny fanamafisana no tsy ilaina foana — tiany fotsiny ianao ho faly miaraka aminy. Ny zavatra rehetra nanandramako an'i Cesar dia miasa mandritra ny herinandro tsy miova sy fiofanana. Izy dia somary 90% nodiovina tamin'ny tranony 3 volana ary afaka manao tetika maro, mandeha tsara amin'ny tadiny SY mihaino baiko . Hitako tamin'ity alika milalao sy manan-tsaina ity fa zava-dehibe tokoa ny fanamafisana avy hatrany ny fanapahanao, 'satria tiany ny mihaika zavatra, mila fantany izay sefony. Tena mahafatifaty toy ny zazakely izy ireo, saingy tadidio fa mieritreritra toy ny alika izy ireo . '
'Cash ity, zanako kely Pugshire amin'ny 11 herinandro.'
Petunia the Pugshire amin'ny faha-7 volana
Hitch the Pug / Yorkshire terrier mix dog (Pugshire) - hoy ny tompony, 'Yug no iantsoantsika azy, fa Pugshires no iantsoanareo azy rehetra. Alikantsika izy ary 10 volana izy ary anjely madio fotsiny! Fa manana ny toetra Yorkie izy izay te hanadihady ny zava-drehetra! Amin'ny zavatra iray foana. '
Mamelatra ny karazana fifangaroan'ny Pug / Yorkshire terrier (Pugshire) amin'ny 10 volana
Bandit the Pugshire puppy amin'ny 5 ½ volana - 'Yorkie lehibe kokoa ny reniny ary Pug ny rainy. Izy dia nitombo tamin'ny haben'ny Pug miaraka amin'ny endrik'i Yorkie (sy ny toetran'ny Yorkie!). Ny pups hafa avy amin'ny fako dia samy hafa tanteraka. Sahala amin'ny Pug izy ireo fa ny haben'ny Yorkie. '
Poki the Pugshire amin'ny 2 taona— 'Ny reniny dia Yorkshire Terrier ary ny rainy Pug miloko volonondry. Izy no alika mahay indrindra, mamy sy mahery indrindra fantatro ary tianay hatramin'ny fahafatesana izy. '
Jemma sy Juicy the Pugshires amin'ny 1 taona— 'Jemma sy Juicy ity. Rahavavy pugshire izy ireo. Androany 1 taona nahaterahan'izy ireo. Matanjaka sy mifikitra be izy ireo, lol! Manaraka ahy amin'izay alehako izy ireo. Ary matetika izy ireo dia mifanila. Mandreraka izy ireo nefa mahavariana! '
Jemma sy Juicy the Pugshires toy ny alika kely
Jereo ohatra misimisy kokoa momba an'i Pugshire
marika fotsy amin'ny alikako
bernese tendrombohitra alika St Bernard Mix alika kely
bulldog frantsay sy mix bulldog anglisy
pyrenees mahafinaritra irlandey wolfhound mifangaro
asehoy ahy ny sarin'omby terriers
boxer olde anglisy bulldog mix